I-Rose Phakathi Kwezimbali - I-Airbnb
I-Rose Phakathi Kwezimbali
Rose Park, South Australia, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Chris
I-1900 Historic Heritage efakwe indlwana enamakamelo okulala amakhulu angu-3, hlala upholile noma ufudumele ngokushisisa/ukupholisa. Igceke elingemuva elizolile lapho ubungeke wazi khona ukuthi unqenqemeni lwedolobha, uhambe ku-CNY, uhambo olungcono kakhulu lwe-200M oluya endaweni yokubhaka edumile ye-Dulwich, ama-Cafe, i-Fringe, i-Victoria Park, i-Norwood Parade shopping kanye nesifunda sokuzijabulisa, indawo yangaphandle ye-lemonas:) ikhaya elikude nasekhaya ozolithanda. I-BBQ namabhayisikili angu-3 x ongawasebenzisa, I-WIFI Yamahhala, i-Netflix
Indlwana yasendlini izwakala ingasemaphethelweni edolobha, idolobha elibiza kakhulu e-adelaide
Le ndawo engaphakathi enamaqabunga enziwe kahle ingamakhilomitha angu-1 kuphela ukusuka e- CBD futhi iyikhaya lezindlu eziningi zamagugu, izindawo zomlando, amapaki, izingadi nezindlela ezinhle ezihlelwe esihlahleni. I-Rose Park ithandwa imindeni kanye nochwepheshe abacebile abakhangayo endaweni enhle, ibanga elifushane ukuya e- CBD kanye nezikole ezinhle kakhulu. Izakhiwo eziningi ezise-Rose Park zibuyele ku- (Inombolo yocingo efihlwe yi-Airbnb) futhi zinesimo sokulondoloza ngenxa yalokho. Le ndawo inezihlabathi eziningi ezihlaba umxhwele nama-villa e-bluestone kumapulangwe amakhulu, alondolozwe ngokucophelela.
4.70 · 11 okushiwo abanye
Amadolobha ase-Adelaide abiza kakhulu Inombolo 2. I-Rose Park – $ (Inombolo yocingo ifihlwe yi-Airbnb)
Le ndawo engaphakathi enamaqabunga enziwe kahle ingamakhilomitha angu-1 kuphela ukusuka e- CBD futhi iyikhaya lezindlu eziningi zamagugu, izindawo zomlando, amapaki, izingadi nezindlela ezinhle ezihlelwe esihlahleni. I-Rose Park ithandwa imindeni kanye nochwepheshe abacebile abakhangayo endaweni enhle, ibanga elifushane ukuya e- CBD kanye nezikole ezinhle kakhulu.
Izakhiwo eziningi ezise-Rose Park zibuyele ku- (Inombolo yocingo efihlwe yi-Airbnb) futhi zinesimo sokulondoloza ngenxa yalokho. Le ndawo inezihlabathi eziningi ezihlaba umxhwele nama-villa e-bluestone kumapulangwe amakhulu, alondolozwe ngokucophelela.
Nikeza izivakashi indawo njalo engathintwa